Inona no ho hita ao Liverpool | Vaovao momba ny dia
Inona no ho hita any Liverpool
Mariela Carril | | Liverpool, Inona no ho hita
Liverpool Izy io dia iray amin'ireo tanàna malaza indrindra any Angletera ary manana zato taona mahery izay. Fantatrao ve? Ankoatr'izay, manana toerana maro nambaran'ny UNESCO izy Lova manerantany ary eo amin'ireo angon-drakitra mahaliana azy dia miavaka ny hoe manana ny vondrom-piarahamonina sinoa tranainy indrindra any Eropa izy.
Fa maninona i Liverpool no tanàna malaza? Eny, voalohany indrindra noho ny fomban-drazana mozika, mazava ho azy, Io no toerana nahaterahan'i The Beatles, saingy misy zavatra betsaka kokoa noho izany raha mikasa ny ho any Angletera ianao ary hiala andro vitsivitsy hiala any Londres ary handeha ho any Liverpool. Avelanay eto ianao inona no tokony ho hitanao.
2 Inona no ho hita any Liverpool
El borough dia naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary nandritra ny taonjato maro ny mponina dia tsy nahatratra olona arivo akory, fa tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo dia nanomboka niova zavatra nifandray tanana tamin'ny varotra an-dranomasina mifototra indrindra amin'ny varotra andevo sy sigara.
Tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia efa manan-danja amin'ny varotra manerantany ny tanàna sy ny seranana. Ohatra, ny landihazo avy any Amerika atsimo izay nanome sakafo ny atrikasan'ny Revolisiona Indostrialy dia niditra teto, ka nandritra ny fotoana fohy lasa nanjary zava-dehibe kokoa noho i Londres aza. Nahasarika ny mpifindra monina ny hareny ary nahatonga azy io ho iray amin'ireo tanàna maoderina marobe.
Taorian'ny Ady Voalohany, tamin'ny fiverenan'ny miaramila, nitombo ny fangatahana asa ary tamin'ny farany dia nitondra fifandonana ara-poko lehibe izy io, nifanaraka tamin'ny zava-nitranga tany amin'ny tontolo hafa ary nanamarika ny fiantombohan'ny fizotran'ny déolonisation izay izay mitranga. dia hanome aorian'ny Ady Lehibe Faharoa.
fa manao ahoana ny tanàna? 283 kilometatra miala an'i London izany, any Liverpool Bay amin'ny Ranomasina Irlanda, 70 metatra monja ambonin'ny haavon'ny ranomasina. Manana toetrandro an-dranomasina antonony, miaraka amin'ny fahavaratra mafana sy ririnina mangatsiaka ary ny afovoan-tanàna dia voahodidina fehin-kibo maitso. ankehitriny olona eo amin'ny antsasaky ny tapitrisa no mipetraka ao, fotsy ny ankamaroany, na dia araka ny nolazainay tetsy ambony aza dia misy mponina mainty manan-danja sy antitra.
Noho ny tantara nandritra ny taona maro sy ny maha-zava-dehibe azy eo amin'ny varotra iraisam-pirenena dia misy toerana mahaliana maro azo tsidihina. Ny ankamaroan'ny trano dia tamin'ny taonjato faha-XNUMX no niorenany. Betsaka ny tranon'ny fomba Zeorziana, betsaka noho ny ao amin'ny Bath ary milaza izany betsaka, ary mazava ho azy ny faritry ny seranana sy ny trano fitahirizany dia samy manana ny famirapiratany avy.
Liverpool no nanana crane hydraulic voalohany eran'izao tontolo izao ary dock mande mihidy voalohany eran'izao tontolo izao, fa ny carte postale mahazatra an'ny seranan-tsambon'ny tanàna dia nanomboka tamin'ny 1846 ary io no antokon'ny trano fantatra amin'ny anarana hoe Albert Dock. Ireo trano ireo dia manan-tantara ary mitana andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny tanàna.
Nanomboka tamin'ny tapaky ny taonjato faha-XNUMX izy ireo ary Vita amin'ny biriky sy vato izy ireo ary misy firafitra vy. Tsy misy kitay ary izany no nahatonga azy ireo ho iray karazana tamin'izany fotoana izany. Tsy afaka nirehitra izy ireo!
ankehitriny namboarina ary efa tonga fivarotana, trano fisakafoanana sy fisotroana ary tranombakoka, ary ity famerenana ny saina nodiavin'izy ireo ity dia azo jerena any amin'ny seranan-tsambo hafa manerantany. Ity ny Museum Fanandevozana Iraisam-pirenena, ny Tate Liverpool, ny Merseyside Maritime Museum ary ny malaza Beatles Story.
Museum momba ny fanandevozana iraisam-pirenena: Izy io dia ao amin'ny Merseyside Maritime Museum ary misy galerie telo izay mifantoka amin'ny fiainan'ny vahoaka Afrikana Avaratra, ny fihazanany, ny varotra ary ny fanafahana azy ireo avy eo. Manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 5 ppm izy io ary afaka miditra.
Tate liverpool: Ity tranombakoka sy galeriana kanto ity dia ao amin'ny Tate Britain sy Tate London ary mifantoka ao amin'ny Zavakanto anglisy nanomboka ny taona 1500 ka hatramin'izao. Izy io dia miasa ao amin'ny trano fitehirizam-bokatra taloha ao amin'ny Albert Dock, amin'ny arabe an-tanàna, ary nisokatra tamin'ny 1899.
The Beatles Story: Tranombakoka momba an'ity tarika mozika ity izy ary nosokafana tamin'ny taona 1990. Misy fialamboly amin'ireo toerana malaza ho an'ny tarika toa ny The Cavern Club Abbey Road Studios.
Toerana iray hafa malaza no mandeha amin'ny anaran'ny Fahasoavana telo, ny Royal Liver Building, ny Port of Liverpool Building ary ny Cunard Building. Izy telo dia eo amin'ny Pier Head, samy hafa ny endrik'izy ireo ary mariky ny harena an-dranomasina ao an-tanàna izy ireo.
Ireo trano rehetra ireo, miampy ny hafa, dia manome ny toetrany manokana ny tanàna ary tao anatin'ny am-polony taona maro izay dia nisy ny fanavaozana sy fanavaozana izay namelomana an'i Liverpool azy ireo. Fa inona no ivelan'ny seranana?
Hay trano manan-tantara, ohatra. Speke Hall dia trano tsara tarehy Tudor nanomboka tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-XNUMX, misy koa ny Croxteth Hall, Woolton Hall, ary ny Bluecoat Chambers tamin'ny taonjato faha-XNUMX natsangana tamin'ny fomba Queen Anne. Ankoatr'izay dia manana katedraly tsara tarehy roa ny tanàna. Katedraly katolika natsangana tamin'ny taona 60 tamin'ny taonjato faha-XNUMX, tsy nisy na inona na inona nentin-drazana tamin'ny famolavolana azy, ary ny Katedraly Anglikana, ny lehibe indrindra amin'ny firenena, amin'ny fomba Gothic.
Ny marina dia amin'ny ankapobeny Misy fomba roa hankasitrahana ny tanàna, ny iray dia ny fandehanana an-tongotra ary ny iray hafa amin'ny fandehanana sambo. Mersey Ferry dia mihazakazaka mandavantaona, miala amin'ny ora isan-ora any amin'ny Head Head ary mitentina £ 16 ho an'ny olon-dehibe roa. Maharitra 70 minitra ny fitsidihana ary afaka mividy tapakila mitambatra ianao hampiasa ilay bus mpizahatany. Misy bisy iray hafa izay mifantoka amin'ny The Beatles, ilay Magical Mystery Tour, miaraka amin'ny mozika sy vaovao, amin'ny £ 18 tapakila. Ary misy fitsangantsanganana an-tongotra ihany koa, Beatleswalks.
Ary farany, ary miresaka momba ny The Beatles, dia tsy azo atao ny miala ao Liverpool raha tsy manodidina anao ny tantaran'ny tarika. Azonao atao ny mitsidika ny Cavern Club tany am-boalohany, teny amin'ny Mathew Street, misokatra foana manomboka amin'ny 11 maraina ary miaraka amina seho mivantana isaky ny alina, na ny fitsidihan'ny taxi anglisy amin'ny 50 pounds a taxi.
Ny mahasarika an'i Beatle vaovao dia ny Museo Beatles Magical, sokafy manomboka ny Alatsinainy ka hatramin'ny Alahady manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 7 hariva, amin'ny 9 pounds ny fidirana, ary miaraka amina fanangonana zavatra mihoatra ny 300 nozaraina tamin'ny rihana telo.
Ity tranombakoka ity dia eo amin'ny Mathew Street, toy ny Cavern Club, ary manolotra dia feno amin'ny alàlan'ny tantaran'ity tarika anglisy ity izay hanova ny mozikan'izao tontolo izao. Zavamaniry maintso Izy io dia tranobe Salvation Army ao Woolton, tanàna ambanivohitra Liverpool, ary koa hira Beatles izay nanjary nalaza tamin'ny 1967, nosoratan'i Lennon, izay nipetraka teo akaiky teo. Mbola mijanona ny tranony ka toerana itiavan'ny mpankafy azy io.
Tranonkala Beatle iray hafa kendrena dia ny Pub Casbah, izay nanombohany ho an'ny tarika. Tsy afaka mandeha amin'ny famandrihana fotsiny ianao ary 15 kilao isaky ny olon-dehibe ny fitsidihana. Araka ny hitanao, Liverpool dia mpamatsy tantara mozika, zavakanto ary kolontsaina. Aza adino izany!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Liverpool » Inona no ho hita any Liverpool
Farihy Plitvice any Kroasia
Isla de Lobos, ny kely indrindra amin'ny nosin'i Canary